How to apply foraSchengen visa in Myanmar - VISITA Travel
How to apply foraSchengen visa in Myanmar
ရှန်ဂန်ဗီဇာ ဘယ်လို လျှောက်မလဲ
ရှန်ဂန်ဗီဇာ လျှောက်ရန်အတွက် ယေဘုယျစည်းမျဉ်းများ
မိမိကိုင်ဆောင်သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစား ( ရိုးရိုးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၊ သံတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၊ အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ) ပေါ်မူတည်ပြီး ဗီဇာစည်းမျဉ်းများ ကွဲပြားသွားပါသည်။ ရှန်ဂန်နိုင်ငံများတွင် မိမိနေထိုင်လိုသော ကာလအပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီး မိမိကိုင်ဆောင်သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာ လုံလောက်သော သက်တမ်း ရှိရပါမည်။
ဗီဇာအမျိုးအစားမှာ မိမိခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် သွားလိုသည့်ကာလပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသွားပါသည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ အောက် (သို့) ၉၀ ရက် အထိ နေမည့် သူများအတွက် ကာလတို ဗီဇာ (ရှန်ဂန်ဗီဇာ) ဖြစ်ပါသည်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ အထက်နေမည့်သူများမှာ ကာလရှည် ဗီဇာဖြစ်ပါသည်။ မိမိသွားလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကာလကြာချိန်ကို ဗီဇာလျောက်သည့်အချိန်တွင် သေချာစွာ ဖေါ်ပြရပါမည်။ ကာလရှည်ဗီဇာ ရရှိသူများအတွက် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိပါက မိမိ၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ဗီဇာ အမျိုးအစားကို ပြောင်းလဲခွင့် မရှိပါ။ ထို့အပြင် အလုပ် လုပ်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါက အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရပြီးမှ ဗီဇာလျှောက်ရပါမည်။
ပင်လယ်ရပ်ခြားရှိ ပြင်သစ်နယ်မြေမျုားအတွက် ဗီဇာစည်းမျဉ်းများသည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိသွားလိုသည့် ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းကို သေချာစွာ ဖေါ်ပြရပါမည်။
ရှန်ဂန်ဗီဇာဟုခေါ်သော ကာလတိုဗီဇာ အမျိုးအစားသည် ရှန်ဂန်နိုင်ငံများကို ၆ လ အတွင်း အများဆုံး ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိ လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်သည်။ ၎င်းဗီဇာသည် တစ်ကြိမ်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ (သို့) အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ခွင့်ဗီဇာဟူ၍ ထုတ်ပေးပါသည်။ ၎င်းဗီဇာ အမျိုးအစားသည် အလည်အပတ်သွားလိုသူများ၊ စီးပွားရေးအတွက်သွားလိုသူများ၊ မိသားစုကို အလည်းသွားလိုသူများ၊ ရက်တိုသင်တန်းသွားလိုသူများ၊ အလုပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ရက်တိုသင်တန်းသွားလိုသူများ နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် လစာရ ယာယီအလုပ် လုပ်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိသူများ ( ဥပမာ- အနုပညာရှင်များ၊ အားကစားသမားများ၊ လစာရ ယာယီအလုပ် လုပ်သူများ ) ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများ နိုင်ငံတကာ ပြင်သစ်လေဆိပ်နယ်နမိတ် အပြင်ဖက် မထွက်ပါက ပြင်သစ်နိုင်ငံဝင်ခွင့် ဗီဇာ မလိုပါ။ သို့သော် ချွင်းချက်အနေဖြင့် အချို့သော နိုင်ငံခြားသားများသည် လေဆိပ်တစ်ထောက်နား ဗီဇာ (Airport Transit Visa) လိုပါသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ၃ လထက် ပိုနေမည့်သူများအတွက် ကာလရှည်ဗီဇာ ထုတ်ပေးပါသည်။ အများအားဖြင့် ပြင်သစ်တွင် ကျောင်းတက်သူများ၊ အလုပ်လုပ်မည့်သူများ နှင့် မိသားစုနှင့်သွားရောက်နေထိုင်မည့်သူများအတွက် ကာလရှည်ဗီဇာ ထုတ်ပေးပါသည်။
ကာလရှည်ဗီဇာအမျိုးအစားမှာ ပြင်သစ်သို့ ရောက်သောအခါ OFII ရုံးကို ဆက်သွယ်ရန်လိုအပ်ပြီး တချို့ကိစ္စများမှာ သက်ဆိုင်ရာ Préfecture တွင် နေထိုင်ခွင့်ကဒ် လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၄) ရှန်ဂန်နိုင်ငံများ အဝင်တွင်စစ်ဆေးမှုများ
ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရှိထားသော်လည်း ရှန်ဂန်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိရန် မလုံလောက်သေးပါ။ ရှန်ဂန်နိုင်ငံများ အဝင်တွင် စစ်ဆေးမှုများ ရှိပါသည်။ ၎င်းစစ်ဆေးမှုသည် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာလိုအပ်သောနိုင်ငံသားများ နှင့် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိသော နိုင်ငံသားများ အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။
ထပ်မံသိရှိလိုပါက ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အင်္ဂလိပ်လိုထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရှန်ဂန်ဗီဇာတစ်ခုတည်းဖြင့် သွားရောက်နိုင်သော နိုင်ငံ ၂၆ နိုင်ငံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အိုက်စလန် (ဥရောပသမဂ္ဂ အသင်းဝင်မဟုတ်)
လိချ်တန်စတိန်း (ဥရောပသမဂ္ဂ အသင်းဝင်မဟုတ်)
နော်ဝေး (ဥရောပသမဂ္ဂ အသင်းဝင်မဟုတ်)
ဆွစ်ဇာလန် (ဥရောပသမဂ္ဂ အသင်းဝင်မဟုတ်)
ဗီဇာစစ်ဆေးခ ကို ဗီဇာလျှောက်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင် တခါတည်း ပေးသွင်းရပါမည်။
Kyat တမျိုးတည်းသာ လက်ခံသည်။ (ဗီဇာလျှောက်လွှာစစ်ဆေးသည့်နှုန်းထားသည် အတက်အကျရှိနိုင်ပါသည်။)
ရှန်ဂန်ဗီဇာ (ကာလတိုဗီဇာ) : Euro 60
ခလေး ၆ နှစ် မှ ၁၂ နှစ်ထိ : Euro 35
ခလေး ၆ နှစ်အောက် : အခမဲ့
ပင်လယ်ရပ်ခြားရှိ ပြင်သစ်နယ်မြေအတွက် ဗီဇာ : Euro 9
ကာလရှည်ဗီဇာ : Euro 99
ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသော ဗီဇာများအတွက် ဗီဇာစီစစ်ကြေးပြန်မအမ်းပါ။
Source: France Embassy, Yangon
ဥရောပသို့ သွားလည်မည် ဆိုပါက
မြန်မာပြည်မှ ဝယ်ယူနိုင်သည့် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားအာမခံ
One Visa for 26 European Countries
ဗီဇာတစ်ခုတည်းဖြင့် ဥရောပ ၂၆နိုင်ငံ သွားနိုင်မည်
Why Visita Travel
For company incentive groups, leisure groups, family holidays and educational trips.
Our chosen accommodations are unique with both modern and traditional hotels.
Groups for any sizes
We offer escorted group tours from small to corporate groups, to global clients.
We cover the whole of UK and the major European destinations.
Suite 27,4Spring Bridge Road, London,